Knowledge Archives » Myanmar Family Life
ခြေစုံရပ် ခါးကို မတ်မတ်ထား လက်နှစ်ဖက်ကို နဖူးပေါ်တင် ခေါင်းကို နောက်လှန်နိုင်သလောက် လှန်ဖိထားပါ။ ခါးမပါသွားပါစေနဲ့ ။ ၁၀ စက္ကန့်ရေပြီး ပြည့်ရင် ဖြည်းဖြည်း လွှတ်ပါ။
ခြေစုံရပ် ခါးကို မတ်မတ်ထား လက်နှစ်ဖက်ကို နောက်စေ့မှာကပ်ပြီး ခေါင်းကို ရှေ့ဖိနိုင်သလောက် ဖိပါ။ ခါးကုန်းမသွားပါစေနဲ့။ ၁၀ စက္ကန့်ရေပြီး ပြည့်ရင် ဖြည်းဖြည်း လွှတ်ပါ။
ခြေစုံရပ် ခါးကို မတ်မတ်ထား ဘယ်ဘက်လက်ကို ခါးထောက်ထားပြီး ညာဘက်လက်က ဦးခေါင်းကို အပေါ်ကနေ ညာဘက်ပါနိုင်သလောက် ဆွဲဖိထားပါ။ ခါးမပါစေနဲ့။ ၁၀ စက္ကန့်ရေပြီး ပြည့်ရင် ဖြည်းဖြည်း လွှတ်ပါ။
ခြေစုံရပ် ခါးကို မတ်မတ်ထား ညာဘက်လက်ကို ခါးထောက်ထားပြီး ဘယ်ဘက်လက်က ဦးခေါင်းကို အပေါ်ကနေ ဘယ်ဘက်ပါနိုင်သလောက် ဆွဲဖိထားပါ။ ခါးမပါစေနဲ့။ ၁၀ စက္ကန့်ရေပြီး ပြည့်ရင် ဖြည်းဖြည်း လွှတ်ပါ။
ခြေစုံရပ် ခါးကို မတ်မတ်ထား ဘယ်ဘက်လက်ကို ခါးထောက်ထားပြီး ညာဘက်လက်က မေးစေ့ကို ဘယ်ဘက်ပုခုံးနဲ့ ထိနိုင်သလောက်ထိ တွန်းလှည့်ထားပါ။
ဘယ်ဘက်ပုခုံးက ရှေ့ကို တိုးမလာပါစေနဲ့ မေးစေ့ကပဲ ပုခုံးပေါ်ရောက်နိုင်သလောက် ရောက်အောင် လှည့်တင်ထားပါ။ စက္ကန့်ရေပြီး ပြည့်ရင် ဖြည်းဖြည်း လွှတ်ပါ။
ခြေစုံရပ် ခါးကို မတ်မတ်ထား ညာဘက်လက်ကို ခါးထောက်ထားပြီး ဘယ်ဘက်လက်က မေးစေ့ကို ညာဘက်ပုခုံးနဲ့ ထိနိုင်သလောက်ထိ တွန်းလှည့်ထားပါ။
ညာဘက်ပုခုံးက ရှေ့ကို တိုးမလာပါစေနဲ့ မေးစေ့ကပဲ ပုခုံးပေါ်ရောက်နိုင်သလောက် ရောက်အောင် လှည့်တင်ထားပါ။ စက္ကန့်ရေပြီး ပြည့်ရင် ဖြည်းဖြည်း လွှတ်ပါ။
ဒီနည်းအတိုင်း အကြိမ်ရေ အကန့်အသတ်မရှိ နားနားပြီး လုပ်ပေးပါ။ များများလုပ်ပေးနိုင်လေ မြန်မြန်ပျောက်ကင်းလေပါ။
ရန်ကုန်မြို့ရှိ အကောင်းဆုံး စာအုပ်ဆိုင် (၁၀) ဆိုင်
စာအုပ်တစ်အုပ်ကို ကြိုက်လို့ Hard Copy ယူထားချင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်မှာ ဝယ်ရမလဲ မသိဘူး။ City Mart တွေမှာတော့ စာအုပ်တွေရောင်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီမှာက နာမည်ကျော်ကြားတဲ့စာအုပ်တွေ လောက်ပဲ တင်တာပါ။ တကယ်အနှစ်သာရရှိတဲ့စာအုပ်တွေကိုဖတ်ချင်တယ်၊ ရွေးချယ်စရာ Category တွေပိုစုံတာကို ရှာဖွေနေတယ်ဆိုရင်တော့ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ စာအုပ်ဆိုင်ကောင်းကောင်းတွေကို ညွှန်းပေးချင်ပါတယ်။
ပန်းစိုးတန်းလမ်း၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်မှာရှိပါတယ်။ စာအုပ်ဆိုင်တွင်းမှာ ကော်ဖီဆိုင်လေးလည်း ဖွင့်ထားတာမို့ ကော်ဖီသောက်ရင်း စာအုပ်ဖတ်ချင်သူတွေအတွက် အဆင်ပြေပါတယ်။ စာအုပ်တိုက်မှာ မြန်မာနဲ့ နိုင်ငံတကာ စာအုပ်ကို သပ်သပ်စီခွဲထားပါတယ်။ နိုင်ငံတကာ စာပေ၊ စိတ်ကူးယဉ်ဝတ္ထု၊ သုတစာပေ၊ မဂ္ဂဇင်း၊ ဖတ်စာအုပ်၊ စသဖြင့် အမျိုးအစားစုံလင်ပါတယ်။ စာရေးဆရာတွေရဲ့နာမည်အလိုက်၊ ကဏ္ဍအလိုက်ခွဲထားပေးပါတယ်။ နေ့တိုင်း မနက် ၈ နာရီခွဲကနေ ညနေ ၇နာရီခွဲထိ ဖွင့်ပါတယ်။
၂. Monument Books & Toys Myanmar
Mounument မှာတော့ ကလေးသူငယ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ စာအုပ်တွေနဲ့အရုပ်တွေကို အဓိကထား ရောင်းပါတယ်။ ရသစာပေနဲ့သုတစာပေတွေကို ဘာသာစကား စုံလင်စွာနဲ့ရနိုင်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာရဲ့ ကလေးသူငယ်လေးတွေရဲ့ကျောင်းသုံးစာအုပ်တွေရှိပါတယ်။ ဘာသာစကားလေ့လာချင်တဲ့လူကြီးတွေလည်း အခြေခံဖတ်စာအုပ်လေးတွေ ဝယ်လို့ရနိုင်ပါတယ်။ သမိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ စာအုပ်လေးတွေလည်း ရှိပါတယ်။ နိုင်ငံခြားဖြစ်အရုပ်တွေလည်း တော်တော်စုံပါတယ်။ သင့်အိမ်က ကလေးအတွက် စာအုပ်နဲ့အရုပ်ဝယ်ပေးဖို့ စဉ်းစားနေရင်တော့ Monument က သင့်တော်ပါတယ်။ ဖိုးရာဇာလမ်း၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်မှာ တည်ရှိပါတယ်။
၃. Myanmar Book Centre
စာအုပ်ဘူဖေးပွဲတွေကျင်းပလေ့ရှိပြီး ဈေးလည်း သက်သာတဲ့ စာအုပ်ဆိုင်ပါ။ တစ်နှစ်မှာ ၂ ကြိမ် ကျင်းပလေ့ရှိပြီး အထူးတလည်နေ့တွေမှာလည်း ကျင်းပတတ်ပါတယ်။ အဲလိုကျင်းပတဲ့အချိန်ဆို ပိုက်ဆံ ၁သောင်းလောက်နဲ့စာအုပ်ကောင်းတွေအများကြီးဝယ်နိုင်ပါတယ်။ ပညာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ စာအုပ်တွေအရောင်းများပြီး သုတစာပေတွေလည်း ရှိပါတယ်။ နေ့တိုင်း မနက် ၉ နာရီကနေ ညနေ ၆နာရီထိ ဖွင့်ပါတယ်။ ဗဟိုလမ်းထောင့်၊ အလုံလမ်းမကြီးပေါ်မှာ တည်ရှိပါတယ်။
၄. Bookworms Book Store
စာအုပ်အမျိုးအစားစုံလင်ပြီး ဈေးလည်း အရမ်းသက်သာတယ်ဆိုတာကို Bookworms မှာ ဝယ်ဖူးသူတိုင်းက အကြံပြုကြပါတယ်။ Discount တွေလည်း ရှိပါတယ်။ နိုင်ငံတကာက Best Seller စာအုပ်တွေကိုလည်း ဈေးသက်သက်သာသာနဲ့ ရနိုင်ပါတယ်။ အခုဒီထက်ပိုစုံလာပြီလို့လည်း သိရပါတယ်။ နေ့တိုင်း မနက် ၉နာရီကနေ ညနေ ၇နာရီထိ ဖွင့်ပါတယ်။ ပန်းဆိုးတန်း အထက်ဘလောက်၊ ကျော်တံတားမြို့နယ်မှာ ရှိပါတယ်။
၅. TAB Book Centre
TAB ကတော့ဖွင့်တာမကြာသေးပေမယ့် စာအုပ်အမျိုးအစားစုံလို့ စာဖတ်သူတွေ ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ စာအုပ်ဆိုင်ပါ။ ရသစာပေတွေကို အဓိက ထားရောင်းတာဖြစ်ပြီး ရသစာပေချစ်သူတွေအကြိုက်တွေ့နေတဲ့ ဆိုင်ပေါ့။ ဆေးဖက်ဆိုင်ရာ၊ ပညာရေးဆိုင်ရာ၊ ကလေး/လူကြီးကြိုက်စာပေ၊ သိပ္ပံဆိုင်ရာ၊ ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးစာအုပ်နဲ့ နိုင်ငံတကာက စာအုပ်တွေလည်း ရှိပါတယ်။ နေ့တိုင်း မနက် ၉နာရီကနေ ည ၉နာရီထိ ဖွင့်ပါတယ်။ ပြည်လမ်း တော်ဝင်စင်တာမှာ ရှိပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံက စာရေးဆရာတွေရဲ့ စာအုပ်တွေကို ထုတ်ဝေပေးတဲ့ စာအုပ်တိုက်ဆိုတာ သိကြမှာပါ။ စာရေးတာကို ဝါသနာပါတဲ့ တက်သစ်စလေးတွေကို လမ်းဖွင့်ပေးနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုပေါ့။ နှစ်တိုင်း ဒီစာအုပ်တိုက်က ထုတ်ဝေတဲ့ ဝတ္ထုတွေဟာ အရမ်းရောင်းရပြီး စာဖတ်ပရိသတ်တွေ အရမ်းကြိုက်ကြပါတယ်။ ဒီစာအုပ်တိုက်က ထွက်မယ့် စာအုပ်တွေကိုတောင် စောင့်ဖတ်ကြရတာပါ။ ရသစာပေတွေနဲ့အဓိက နာမည်ကြီးတဲ့ဆိုင်ပေါ့။ နေ့တိုင်း မနက် ၉နာရီကနေ ညနေ ၆နာရီထိ ဖွင့်ပါတယ်။ သီရိလင်္ကာရာမကျောင်းလမ်း၊ တာမွေမြို့နယ်မှာ တည်ရှိပါတယ်။
၇. Bagan Book House
ဒီဆိုင်က တခြားဆိုင်တွေလောက်တော့ နာမည်မကြီးပါဘူး။ မြန်မာ့သမိုင်းနဲ့ မြန်မာစာပေအဟောင်းတွေကို စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေလောက်ပဲ သိတဲ့ ဆိုင်ပါ။ များသောအားဖြင့် ရုပ်ပြစာအုပ်တွေ၊ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးသမိုင်းစာအုပ်၊ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုစာအုပ်တွေရှိပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်လို ရေးထားတဲ့ စာအုပ်တွေလည်း ရှိတာကြောင့် နိုင်ငံခြားသားတွေ သဘောကျကြပါတယ်။ အခြားသော အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေရဲ့စာပေတွေလည်း ရှိပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ရှေးခေတ် အနုပညာသည်တွေအကြောင်းရေးထားတဲ့ စာအုပ်တွေလည်း ရှိပါတယ်။ နေ့စဉ် မနက် ၉နာရီကနေ ညနေ ၆နာရီထိ ဖွင့်ပါတယ်။ ၃၇ လမ်း၊ ကျောက်တံတား မြို့နယ်မှာ တည်ရှိပါတယ်။
စာအုပ်လည်းရောင်းသလို စာအုပ်လည်း ထုတ်ဝေပါတယ်။ စာဖတ်ပရိသတ်တွေကြား ရေပန်းစားပါတယ်။ ဒီနှစ်အစောပိုင်းကမှ စာအုပ်ထုတ်ဝေခြင်း ၂၀ ကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်ကို ကျင်းပခဲ့ပြီး ၃၀ ရာခိုင်နှုန်း Discount ချပေးခဲ့ပါသေးတယ်။ လတိုင်း Best seller စာအုပ်တွေကို ကြေငြာပြီးတော့ နောက်ထပ် အသစ်ထွက်မယ့် စာအုပ်တွေကိုလည်း မိတ်ဆက်ပေးပါတယ်။ ရာပြည့် စာအုပ်တိုက်ကတော့ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်မှာ တည်ရှိပါတယ်။
အိုဟောင်းနေပြီဖြစ်တဲ့ အာရုံသစ်စာအုပ်ဆိုင်မှာတော့ ကလေးပုံပြင်နဲ့ကာတွန်းစာအုပ်တွေကို မြန်မာဘာသာရော အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ပါ အလွယ်တကူရနိုင်ပါတယ်။ ငယ်ငယ်ကဖတ်ခဲ့တဲ့ ကာတွန်းစာအုပ်တွေကို ပြန်ဖတ်ချင်ရင်တော့ အာရုံသစ်ကိုသာ သွားလိုက်ပါ။ အင်္ဂလိပ် မဂ္ဂဇင်းနဲ့ ဂျာနယ် အဟောင်းတွေကိုလည်း ရောင်းပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း၊ ပန်းပဲတန်းမြို့နယ်မှာ တည်ရှိပါတယ်။
၁၀. The Book Town
ဒီဆိုင်လေးက အသစ်ဖြစ်တဲ့အပြင် စနစ်ကျပြီး ဂန္တဝင်ဆန်တဲ့ အငွေ့အသက်တွေနဲ့ လွှမ်းမိုးနေပါတယ်။ စိတ်ကို relax ဖြစ်စေပြီး မြင်မြင်သမျှ စာအုပ်တွေက ဝယ်ချင်အောင် ဆွဲဆောင်နေသလိုပါပဲ။ ပရိသတ်အကြိုက် စာရေးဆရာတွေရဲ့ စာအုပ်တွေကိုလည်း စုစည်းပေးထားပါတယ်။ ရသစာပေနဲ့ဘာသာပြန်ဝတ္ထုတွေ အဓိကထား ရောင်းပါတယ်။ ငွေပေးချေမှုကလည်း ငွေသားအပြင် ကဒ်စနစ်တွေပါသုံးပြီး ပေးနိုင်ပါတယ်။ တနင်္လာနေ့တစ်ရက် ပိတ်ပါတယ်။ မိုးစွေလမ်း၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်မှာ တည်ရှိပါတယ်။
အခုပြောခဲ့တာကတော့ အကောင်းဆုံးတွေလို့မဆိုလိုပေမယ့် စာဖတ်ပရိသတ်တော်တော်များများ အကြိုက်တွေ့တဲ့ဆိုင်တွေပါ။ ဝယ်ချင်တဲ့စာအုပ်ကို ဘယ်မှာရနိုင်မလဲ ရှာဖွေနေတဲ့သူတွေအတွက် အထောက်အကူ ဖြစ်စေဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ အခုပြောခဲ့တဲ့နာမည်တွေအတိုင်း Facebook မှာရှာလိုက်ရင်လည်း page တွေ၊ လိပ်စာနဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေ ထွက်လာမှာပါ။
၁။ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ပတ်စ်ပို့ Passport သက်တမ်း။ Check Your Passports’s Validity
သင် ပြည်ပခရီးသွားဖို့ အစီအစဉ်ရှိလျှင် သင်၏ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ပတ်စ်ပို့ Passport သက်တမ်းကို အရင်စစ်ဆေးပါ။ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ပတ်စ်ပို့ Passport သက်တမ်းသည် အနည်းဆုံး ၆ လအထက်တွင် ရှိရပါမည်။ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ပတ်စ်ပို့ Passport သက်တမ်း ၆လထက်နည်းလျှင် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအရာရှိမှ သင့်အား လေယာဉ်ပေါ်သို့ပေးတက်မည်မဟုတ်ပါ။
သင် ပြည်ပခရီးသွားဖို့ စီစဉ်ထားလျှင် သွားမည့်နိုင်ငံသည် မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် ဗီဇာ လို ၊ မလို သက်ဆိုင်ရာသံရုံးများတွင် စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
၁ ထိုင်းနိုင်ငံ (Thailand) ၁၄ ရက်ဗီဇာ ကင်းလွတ်ခွင့်
၂ စင်္ကာပူနိုင်ငံ (Singapore) ၃၀ ရက်ဗီဇာ ကင်းလွတ်ခွင့်
၃ ဘရူနိုင်းနိုင်ငံ (Brunei) ၁၄ ရက်ဗီဇာ ကင်းလွတ်ခွင့်
၄ ကမ္ဗောဒီးယားနိုင်ငံ (Cambodia) ၁၄ ရက်ဗီဇာ ကင်းလွတ်ခွင့်
၅ လာအိုနိုင်ငံ (Laos) ၁၄ ရက်ဗီဇာ ကင်းလွတ်ခွင့်
၆ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ (Vietnam) ၁၄ ရက်ဗီဇာ ကင်းလွတ်ခွင့်
၇ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ (Indonesia) ၃၀ ရက်ဗီဇာ ကင်းလွတ်ခွင့်
၈ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ (Phillippines) ၃၀ ရက်ဗီဇာ ကင်းလွတ်ခွင့်
၄။ အနောက်ဘက်/ကျောဘက် အိတ်ထဲတွင် နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ပတ်စ်ပို့ Passport ကို မထည့်ပါနှင့်။ Don’t Ever Put Your Passport in Your Back Pocket
ခရီးထွက်ရာတွင် သင်၏ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ပတ်စ်ပို့ Passport ကို အနောက်ဘက်/ကျောဘက် အိတ်ထဲသို့ ထည့်ရန်မသင့်ပါ။ မတော်တဆအောက်သို့ ပြုတ်ကျခြင်း/ခါးပိုက်နှိုက်ခြင်းများကြုံတွေ့နိုင်ပါသည်။ သင်၏ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ပတ်စ်ပို့ Passport နှင့်အခြားအရေးကြီးစာရွက်စာတမ်းများကို အရှေ့ဘက်အိတ်ထဲတွင် ထားခြင်းသာ ဘေးအကင်းဆုံးပါ။
၅။ ၂ခါ ပြန်စစ်ပါ။ Always Look Twice
မိသားစုနှင့်သော်လည်းကောင်း၊ သူငယ်ချင်းအုပ်စုများနှင့်သော်လည်းကောင်း၊ ခရီးသွားလျှင် သင်သည် အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သည်ဆိုပါစို့။ Departure/ Arrival/Custom forms များဖြည့်ပါက ပိုမိုလွယ်ကူစေရန် တစ်ဦးချင်းစီရဲ့နာမည်၊ မွေးနေ့၊ Passport Number ၊ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ပတ်စ်ပို့ Passport စထုတ်တဲ့နေ့၊ ကုန်ဆုံးတဲ့နေ့များကို စာရွက်လေးဖြင့် Note ထုတ်ထားပါ။ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ပတ်စ်ပို့ Passport များကိုအိတ်ထဲမှသွင်းလိုက်၊ ထုတ်လိုက် လုပ်ရန် မလိုတော့ဘဲအချိန်ကုန်သက်သာပြီး ဘေးလည်းကင်းစေပါသည်။
သင်အိမ်မှမထွက်ခင် သင်၏ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ပတ်စ်ပို့ Passport နှင့် အရေးကြီးစာရွက်စာတမ်းများကို မိတ္တူကူးထားပါ။ ပိုပြီးစိတ်ချရအောင် ဓါတ်ပုံရိုက်ထားပြီး မိမိ၏ဖုန်းထဲတွင်ဆောင်ထားပါ။ (သို့မဟုတ်) e-mail ထဲတွင်သိမ်းထားပါ။ အကယ်၍သင်၏ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ပတ်စ်ပို့ Passport ပြည်ပနိုင်ငံများတွင်မတော်တဆ ပျောက်ဆုံးသွားပါက မိမိနိုင်ငံ၏သံရုံးသို့ လူကိုယ်တိုင်ရောက်အောင်သွားပါ။ သံရုံးမှသက်ဆိုင်ရာအရာရှိများ၏ ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်း လိုက်နာပါ။ သံရုံးများသည် များသောအားဖြင့် အစိုးရ ရုံးစိုက်ရာမြို့ (သို့) အဓိကမြို့များတွင်ရှိတတ်သည်ကို အထူးသတိပြုပါ။ စနေ၊ တနင်္ဂနွေ နှင့် အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များတွင် သံရုံးများပိတ်သည်ကိုလည်းအထူးသတိပြုပါ။
ပြည်ပသို့စီးပွားရေး အရ သွားရောက်လုပ်ကိုင်မည့်နိုင်ငံသားများအားထုတ်ပေးသော စာအုပ်အမျိုးအစား
၂. PT = Dependent Passport ပြည်ပတွင် အလုပ်လုပ်နေသော ခင်ပွန်း/ဇနီး နှင့် လိုက်ပါနေထိုင်သော မှီခို နိုင်ငံသားအားထုတ်ပေးသောစာအုပ်အမျိုးအစား
ပြည်ပသို့ သာသနာရေး ဘာသာရေးနှင့် ပတ်သတ်သော နိုင်ငံသားများအားထုတ်ပေးသည့်စာအုပ်အမျိုးအစား
ပြည်ပသို့ သဘောင်္သား ပင်လယ်ခရီးနှင့်ပတ်သတ်သောနိုင်ငံသားများအားထုတ်ပေးသောစာအုပ်အမျိုးအစား
ပြည်ပသို့ ကျောင်းသား ပညာတော်သင် နိုင်ငံသားများအားထုတ်ပေးသည့်စာအုပ်အမျိုးစား
ပြည်ပသို့ အလည်အပတ် short visit ခရီးတို အလည်အပတ်နိုင်ငံသားများအားထုတ်ပေးသည့်စာအုပ်အမျိုးအစား
ပြည်ပသို့ သံတမန်ရေးရာ ကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သတ်သောနိုင်ငံသားများအားထုတ်ပေးသည့်အမျိုအစား
ပြည်ပသို့ အရာရှိ နိုင်ငံတော်အရေးအရာနှင့်ပတ်သတ်သောနိုင်ငံသားများအားထုတ်ပေးသည့်စာအုပ်အမျိုးအစား
နိုင်ငံရေး သံတမန်ကိစ္စနှင့် အပ်နှင်းခံရသူနိုင်ငံသားများအတွက်.
ဒါ့​ကြောင့်​ နိုင်​ငံကူးလက်​မှတ်​(passport)ပြုလုပ်​မည်​ဆိုပါက မိမိဟာ ဘုရားဖူးသွားမှာလား၊အလုပ်​နဲ့သွားမှာလား၊အလည်​အပတ်​လား စသည်​ဖြင့်​(type)အမျိုးအစားကို မှန်​ကန်​​​အောင်​ရွေးချယ်​တတ်​ဖို့လိုပါတယ်​။
ချိုင်းမွေးတွေကို ရိတ်စရာမလိုဘဲ သဘာဝအတိုင်း ကျွတ်သွားစေမယ့် နည်းလမ်းကောင်းများ
နွေရာသီက ဂါဝန်လက်ပြတ် ၊ အင်္ကျီလက်ပြတ် ၊ ဘောင်းဘီတို ၊ ဘီကီနီ တို့ဝတ်ရမယ့် အချိန်ပါ။ ဒီအ၀တ်အစားတွေ လှပေမယ့် ချိုင်း နဲ့ ခြေသလုံးရှိ အမွှေးတွေ ရှင်းနေမှ ကြည့်လို့လှပါတယ်။ အမွှေးရိတ်တယ်ဆိုတာ အသားအရေကို ကြမ်းတမ်းစေတယ် ၊ ပြန်ပေါက်လာတဲ့ အမွှေးတွေက ကြမ်းလာတယ် ၊ အချိန်ခဏလေးနဲ့ ပြန်ပေါက်လာတယ်။ ဒါကြောင့် မွှေးရိတ်တံနဲ့ ရိတ်စရာမလိုဘဲ သဘာဝနည်းတွေကို သုံးပြီး အမွှေးချွတ်ပေးနိုင်မယ့် နည်းလမ်း (၃)မျိုးကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
(၁) သကြားနဲ့ သံပရိုရည်
သကြား နဲ့ သံပရိုရည် ရောထားတဲ့အနှစ်ကတော့ မလိုချင်တဲ့ အမွှေးတွေကို ချွတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ၎င်းအနှစ်က အမွှေးတွေကို လွယ်လွယ်ချွတ်ပေးနိုင်ပြီး တော်တော်ကြာတဲ့အထိ ပြန်မပေါက်ပါဘူး။
အချစ်ရေးမှာ ကိုယ့်ဘက်ကပဲ အမြဲအလျှော့မပေးသင့်တဲ့ အကြောင်းအရင်း (၅) ချက်
ပါဝင်ပစ္စည်းများ – သကြား (တစ်ခွက်) ၊ ပျားရည် (ခွက်ရဲ့ လေးပုံတစ်ပုံ) ၊ သံပရိုရည် (စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ဇွန်း) ။
– ပါဝင်ပစ္စည်းများကို ဇလုံထဲ ထည့်ပေးပြီး ပျစ်လာအောင်မွေပေးပါ။
– အအေးခံပြီးရင် သုံးနိုင်ပါတယ်။
(၂) ကြက်ဥ အကာ နဲ့ cornstarch
ချိုင်းကြားရှိ အမွှေးတွေကို ချွတ်ဖို့အတွက်က ဆားဝက်ခြံကို ပျောက်အောင်လုပ်ဖို့ထက်တောင် ပိုလွယ်ပါတယ်။
ပါဝင်ပစ္စည်းများ – ကြက်ဥ (၁လုံး) ၊ cornstarch (စားပွဲတင်ဇွန်းတစ်ဝက်) ၊ သကြား (စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ ဇွန်း)။
– ကြက်ဥကို အကာ နဲ့ အနှစ်ခွဲပေးပါ။
– ကြက်ဥအကာ ကိုယူပြီး ပါဝင်ပစ္စည်းများအားလုံးကိုရောပေးပါ။
– မလိုချင်တဲ့ အမွှေးပေါ် လိမ်းပေးပြီး ခြောက်အောင်ထားပေးပါ။
– ခြောက်သွားမှ ဆွဲချွတ်ပေးပါ။
အမျိုးသားတွေ နားမလည်နိုင်တဲ့ အမျိုးသမီးတိုိ့ကိစ္စများ
(၃) Baking soda နဲ့ နနွင်း
ပါဝင်ပစ္စည်းများ – နနွင်း (စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ ဇွန်း ) ၊ baking soda (စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ ဇွန်း) ၊ ရေ ။
– နနွင်း နဲ့ baking soda ကိုရောနေချိန်မှာ ရေထည့်ရောပြီး မွှေပေးပါ။
– အနှစ်ပြစ်လာရင် ချိုင့်ပေါ်မှာ လိမ်းပေးပြီး အခြောက်ခံပေးပါ။
– လက်နဲ့ ပွတ်သပ်ပေးပြီး ရေနဲ့ဆေးပေးပါ။